Fanatanjahantena - Fanampiny Brezila - Pejy 6
Biceps: Fantaro bebe kokoa momba ity hozatra tena ilaina rehetra ity!
10 Jona 2013
Biceps, na biceps brachii amin'ny teny latinina, no antsointsika hoe "loha roa" na ampahany roa voalohany hita ao amin'ny sandry. Misy io anarana io amin'ny reference... Tohizo ny famakiana »Biceps: Fantaro bebe kokoa momba ity hozatra tena ilaina rehetra ity!
4 Jona 2013
Ny indostrian'ny bodybuilding dia manana ny fifaninanana izay mikatsaka ny fahalavorariana ny vatana, ary tahaka ny fanatanjahan-tena rehetra dia manana ny sampiny ihany koa izy. Ary iray amin'ireo malaza indrindra… Tohizo ny famakiana »Ronnie Coleman
3 Jona 2013
Tsy misy tsara kokoa noho ny bodybuilding ho an'ny vehivavy, fantatrao? Ho fanampin'ny fampihenana lanja toy ny fanazaran-tena rehetra miaraka amin'ny hetsika tsy tapaka, dia mamaritra… Tohizo ny famakiana »Fanatanjahantena vehivavy
Fanadihadiana eto an-tany: Fantaro ny fanaovana azy ary ny fitandremana tokony horaisina
Betsaka ny fanazaran-tena mavesa-danja izay miasa amin'ny faritra manokana amin'ny vatana, saingy vitsy ihany no miasa miaraka amin'ny hozatra marobe, ny iray amin'izy ireo dia ny lehibe sy ny vokatra… Tohizo ny famakiana »Fanadihadiana eto an-tany: Fantaro ny fanaovana azy ary ny fitandremana tokony horaisina
Mahazoa hena hozatra
Iza no mbola tsy nanonofy ny hanana vatana voafaritra tsara, manana fiolahana sy hozatra tonga lafatra, sa tsy izany? Mazava ho azy fa ny tsara rehetra dia mila… Tohizo ny famakiana »Mahazoa hena hozatra
Maro ny olona te-hahafantatra fotsiny ny fomba hahazoana hozatra, fa matetika no tsy mahalala ny lohahevitra amin'ny fomba fampidirana. Noho izany, mba hanampy anao amin'ny… Tohizo ny famakiana »Hozatra
Ny hypertrophy hozatra dia dingana irin'ny atleta sy ireo mpankafy ny fanatanjahan-tena izay mitranga ao amin'ny hozatra izay mahatonga azy ireo hitombo, ary mitranga amin'ny fomba mahomby kokoa ... Tohizo ny famakiana »Hypertrophy